‘पुलिस गर्नु गर्यो ! ‘मेरा करङ हिजोभन्दा आज दुख्दैछ रामचन्द्र पौडेल’ - Aajako Nepali Khabar
Home राजनीति ‘पुलिस गर्नु गर्यो ! ‘मेरा करङ हिजोभन्दा आज दुख्दैछ रामचन्द्र पौडेल’
‘पुलिस गर्नु गर्यो ! ‘मेरा करङ हिजोभन्दा आज दुख्दैछ रामचन्द्र पौडेल’
राजनीति admin December 4, 20200Comment
काठमाडौं रामचन्द्र पौडेल। नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफुलाई प्रहरीले दुख दिएको बताएका छन् । उनले आफ्नो शरीर दिउँसोभन्दा साँझ दुखाइ बढ्दै गएको बताएका छन् ।
बुधबार पौडेललाई गृह जिल्ला तनहुँको व्यास नगरपालिका वडा नम्बर १, १० र ११ जोड्ने बुल्दी खोलामाथिको पुल बुधबार उद्घाटन गर्न जाँदा निषेधाज्ञा तोडेको गरेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । लामो समय गृहजिल्लामा रहेका पौडेल विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका थिए ।
‘पुलिसको ड’ण्डा’बाट पे’लि’एका मेरा करङ दिउँसोभन्दा साँझ दुखेर आयो,’ पौडेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हिजोभन्दा आज दुखाइ बढी छ ।’
सात दशकको अथक प्रयासबाट प्राप्त गणतन्त्रमा पनि पुलिसको पेलानबाट छुटकारा नमिलेको पौडेलले बताए । ‘सात दशकको अथक प्रयासबाट प्राप्त गणतन्त्रमा पनि पुलिस पे’ला’नबाट छुटकारा मिल्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘असली लोकतन्त्र कहिले साकार हुने हो रु मेरो चिन्ता यसैमा छ ।’
पुलको उद्घाटनका क्रममा नेकपाका नेता कार्यकर्ताले विरोध गरेपछि स्थानिय प्रशासनले निषेधाज्ञा लागू गरेको थियो । निषोधाज्ञा तोडेर पुलको उद्घाटन गर्न गएका नेता पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनलाई केही समय राखेर छोडिदिएको थियो ।